That's so good, right?: November 2008
Posted by Alex Aung at 9:15 PM No comments:
New Year Eve 2009 အခါသမယလေးပါ။ စောစောပိုင်းအချိန်တွေတုန်းကတော့ ဒီညအပြင်လုံးဝ မထွက်တော့ဘူး အိမ်ထဲမှာပဲ တစ်ယောက်တည်းငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ် ညနေခင်းလေးကိုကုန်ဆုံး စေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ တီဗီဖွင့်ကြည့် ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေပြောင်းကြည့်ရင်း မြို့တော် တစ်ခွင် ဒီရာသီအတွက် ပြင်ဆင်ထားတာတွေ ၊ ကလပ်တွေရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အစီအစဉ်ကြော်ငြာ တွေ တွေ့လာတော့ စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်လာရတယ်။ အပြင်ထွက်ဖို့...... သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပီကဲ ဖို့ အမွှေးအမျှင်တွေရိတ်၊ ရေမိုးချိုး အတောက်ပဆုံးဖက်ရှင်ကိုဝတ်ပြီးတော့မှ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဟိုဒီ လမ်းလျှောက်ရင်း စိတ်ဒွိဟဖြစ်နေမိတယ်။ ခဏနေကတော့ အိမ်မှာပဲနေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ မလား။ ဟင်း.....နောက်နှစ်နာရီလောက်ကြာရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလည်းဆိုတာ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာတဲ့လဲ။ ကလပ်က ကပွဲကြမ်းပြင်ထက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုများ ပြန်ရှာတွေ့နေမလားမသိ။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဒိုင်ယာရီပေါ်မှာ စာတွေရေးရင်း ရီဝေေ၀ အရသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ၀ိုင်ဖြူဖြူ တစ်ခွက်ကို တစိမ့်စိမ့်သောက်ရင်းပေါ့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာထက်မှာ။ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ခံစား မိရတာကတော့ ၀ိုင်ဖြူကို သောက်တာ မိန်းမဆန်တဲ့သူတွေအတွက်လို့ ဒါမှမဟုတ် နေ့လည်စာ စား ချိန်မှာ ဒါကိုသောက်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့ ကိုယ့်ဖြစ်တည်နေမှုကို မေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာ။ Oh...Well တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သောက်ပစ်လိုက်ရင် ဒါတွေအားလုံး ဘာမှ မဟုတ်တော့ဘူး။
စိတ်ထဲမှာ တစ်ဖက်က မည်းမှောင်နေတဲ့ ...ပြောပြရရင် အမှောင်ချထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ ညမီးအိမ် ကိုသာထွန်းရင်း အံ့အားသင့်စရာ အတွေ့အကြုံတွေ ကုန်လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေအကြောင်းချရေး ရတာ စိတ်ထွက်ပေါက်ရမိသလိုလို။ အခြားတစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ရေးဖြစ်နေ တာ ခံစားရတာတွေကိုဖွင့်အံနေတဲ့ အဖြစ်ကနေ မိမိကိုယ်ကို ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ် တစ်ခြား နည်းလမ်းနဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှု ၊ ဖြစ်ခဲ့မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်အသက်ရှင်ဖို့ရော ၀ါသနာကြောင့်ပါရွေး ချယ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ မကြာခဏထိပ်တိုက်တွေ့ရပြန်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက အနုပညာထက် ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို အလေးမူ သတိထားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လည်း ၀င်မိပါတယ်။
"အိုး...ဘုရားသခင်၊ ဆက်မရေးနိုင်တော့ဘူး မတော်တဆများ မာမီဖတ်မိသွားရင်"။ ဟင်း....ဟင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်သတိပေးရတာလည်းမကြာခဏ ကိုယ့်ခံစားရသမျှကို ချရေးပြီး မာမီဆီ မပို့ဖို့ကိုရော ၊ အရွယ်ရောက်လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုရောပေါ့။ မာမီ့ အုပ်ချုပ်မှု စဉ်းမျဉ်း အ၀န်းအ၀ိုင်းက ထွက်ပစ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ ရေးသမျှစာ၊ ပြောသမျှစကားတွေကို ဂရုထားစရာ သိပ်မလိုတော့တာဘဲ။
ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ကျွန်တော်ချရေးခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ကြိုက်မိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ၊ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ် ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပြဇာတ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကို ပြန်တွေးမိတဲ့အခါ စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေး လွန်းခဲ့တာကို သတိထားမိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေ အပေါ် စိတ်ထဲတမျိုးတမည်ဖြစ်ခဲ့တာ ရင်တဖိုဖို ခံစားမိခဲ့တာတွေကို ခုချိန်ပြန်ဆန်းစစ်မိတော့ "homo" ဘ၀၊ ကျွန်တော် ဒီဘ၀ကိုနှစ်ခြိုက်နေမိပါပေါ့လား။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ့ "homo" ဖြစ်နေရခြင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိထိတ်လန့်စရာကောင်းလိုက် မလည်း။ ပြောမယ့်သာပြော ရတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေအတွက် ဆက်ဆံရေးက ဒီလိုပါပဲလေ။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်လေ ကိုယ်ချစ်တဲ့ နှစ်သက်နေတဲ့ မင်းသားဟာ သာမန်ယောက်ျား တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ရင် ရင်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်သက်နိုင်ပါတော့မလဲ။ "ဟေး....ဒီညလေ အရမ်း ပျော်တာပဲသိလား ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မင်းသားလေး အကယ်ဒမီရလို့။" ပြောပြီးမှ ဖုန်းဆက်ပြီးပြော ပြီးမှ ကိုယ့်အသံကိုကိုယ်သတိထားမိသွားတယ်။ အခုပြောပြမိခဲ့တဲ့သူတွေဟာ straight friends တွေပါလားလို့။ သူတို့က ကျွန်တော်ဟာ body ကလည်း smart မျက်နှာကလည်း cute ။ မင်းဟာ ကောင်မလေးတွေကြားမှာစတားပဲတဲ့ ပြောပြခဲ့ကြတာ မကြာသေးခင်ကပဲ။ ဖုန်းဆက်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဝမ်းသာမှုတွေဟာ ၀မ်းနည်းအားငယ်မှုဖြစ်သွားပြီး အပြုအမူတွေဟာ အရမ်းကို မိန်းမဆန်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့ ။ နောက်နေ့လည်းရောက်ရော အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေကပဲ "ဖုန်းထဲမှာ မင်းအသံမှ ဟုတ်ရဲ့လား...၊ မင်းကို သံသယ၀င်စရာကောင်းနေပြီ မင်း gay ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား"လို့ မေးလာတော့ ကျွန်တော်.....ကျွန်တော် ဘာဖြေရမှန်း....မသိ။
ထားလိုက်ပါ....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ကိုယ့်စိတ်လွတ်လပ်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး။ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး အဖြစ်ယူဆမနေတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ရက်လောက်နေတော့ Miata ကားလေးကို ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Andrea Boccelli ရဲ့ album အသစ် "Cieli di Toscana" ကိုရောပေါ့။ ကားအမျိုးအစားက လှတပတချစ်စရာလေး။ ဟား...ဟား.. ဂေးတွေအများဆုံး ၀ယ်စီးလေ့ရှိတဲ့ ကားမျိုးဆိုပဲ။ ဖြောင့်တန်းလှပတဲ့ လမ်းမကြီး ကိုယ့်ကားကိုစီး ပျော်ရွှင်စွာပဲမောင်းနှင်ထွက်ခဲ့တော့တယ်။ Boccelli ကလည်း Italian Opera composer Mascagni ရဲ့ music ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သီကျူးနေလေရဲ့။ ပျော်ရွှင်မိသလို ခံစားရတယ် အရှိန်မြင့်မြင့်ကားလေးရယ်၊ သီချင်းသံတွေရယ် လွင့်မျောနေသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း စိတ်ညစ် တဲ့ အခါတိုင်း ကားမောင်းထွက်ကျင့်ရှိခဲ့တာ။
ကျွန်တော် ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ straight man စစ်စစ်တစ်ယောက်လောက်နဲ့ တွေ့ချင်ပါသေးရဲ့။ နွေဦး ရာသီမှာ Boccelli ရဲ့ သီချင်းကိုနားထောင်ရင်း ၊ Miata ကားလေးကိုမောင်း တစ်ကိုယ်လုံး Abercrombie & Fitchကိုဝတ်ဆင် DKNY မျက်မှန်ကို တပ်ထားလေ့ရှိသူမျိုးပေါ့။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲံ အတွေ့အကြုံတွေ ပျော်ရွှုင်မှုတွေကို ရရှိဖူးပြီးနောက်ပိုင်း တစ်ခြား လူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ဘာလို့သတ်မှတ်လည်း ဂရုမစိုက်တော့သလို မာမီဆူမှာကိုလည်း ကြောက် မနေတော့ပါဘူးလေ။ ရိုစီတစ်ယောက် လက်ထပ်တယ် နောက်ကလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာလို အသက် ၂၃နှစ်ကျော်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရှာတွေ့ခဲ့တယ်၊ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ ရှူး.....တိုးတိုးစိတ်တွေ အကျဉ်းချခဲ့ရတာကြာပြီလေ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်ဖို့ စည်းမျဉ်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ခွင့်ပြုပါ သူငယ်ချင်းရယ်ပေါ့။
It's great......really great.
ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက မှတ်မိသေးတယ် အ၀တ်ရုပ်လေးတွေ အတိုအစအ၀တ်လေးတွေကို လက်နဲ့ချုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ရတာ။ အခုလည်း အလုပ်အားရင် ချုပ်လုပ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ဖွားဖွားကြီးနဲ့ အတူနေဖြစ်တုန်းက (မာမီ သင်တန်းတစ်ခုကိုသွားတက်နေတဲ့ ကာလမှာ။) သင်ပေးခဲ့တာပေါ့ အချုပ်အလုပ် အချက်အပြုတ်တွေကို။ ဖွားကပြောပြတယ် ဒယ်ဒီတို့၊ အန်ကယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက လည်း သင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။ ဒယ်ဒီတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တီဗွီတို့ အင်တာနက်တို့မရှိသေးကြတော့ စိတ်လေနေမှာဆိုးလို့ အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ စိတ်တွေလည်း ပျောက်အောင် သင်ပေးခဲ့တာ။ ချုပ်လိုက် ဖြဲလိုက် ဖွပစ်လိုက်နဲ့ အ၀တ်စတွေကြား ချည်လုံး တွေကြား အိပ်ပျော်သွားတတ်တာ အမောပေါ့တဲ့လေ။ ဒယ်ဒီ ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ အမွှေးပွ ရုပ်လေးတွေ၊ သစ်သားပန်းပုရုပ်လေးတွေကို ခုထိ အိမ်မှာတွေ့ရတုန်းပါ။ သူကတော့ အဲဒီ ငယ်ဘ၀ကို မေ့ပစ်သွားပြီထင်ပါရဲ့လေ။ ကလေးစောင်လေးတွေ ၊ ပုဝါလေးတွေ၊ မာဖလာ လေးတွေ၊ သိုးမွှေးစောင် စသဖြင့် လုပ်တတ်သမျှ ချုပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်မှတ်မိ နေဆဲပါ။
ဖွားဆီမှာနေထိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီကာလတုန်းကမှတ်မိနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ သဘာဝအတိုင်း "softball" ကစားဖို့ ကြိုးစားမိခဲ့တာပေါ့။ ဖွားဖွား၊ ဖိုးဖိုးတို့ မုန့်ဖုတ်နေတဲ့အချိန် တစ်ခြား ညီအစ်ကိုတွေ၊ ၀မ်းကွဲညီအစ်မတွေ ၊ ဦးလေးတွေ စုဝေး ထိုင်နေကြ တဲ့ အချိန်မှာ။ အဖြစ်အပျက်ကဘာလဲဆိုတော့ ဘော်လုံးကို ကျွန်တော့်ဆီပစ်တဲ့အခါ ဖမ်းဖို့မကြိုး စားဘဲ မျက်စိကိုသာတွင် တွင်မှိတ်နေဖြစ်ခဲ့တော့ ခေါင်းကို မကြာခဏထိမှန်ခံရတာပေါ့။ ဒီတော့ အချုပ်အလုပ်ကို ပိုကြိုက်မိခဲ့တော့တာ။ ကဲ...ခင်ဗျားရော ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်လို အဖြစ် အပျက်တစ်ခုခုတော့ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
"Hmmmm, Tommy is certainlyadifferent little boy, now isn't he?"
ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဂီတသံနှင့် ကျွန်တော်တို့ မိသားစု Rome ကိုပြောင်းရွှေ့ တုန်းကအကြောင်းတွေကိုလည်း စဉ်းစားမိ ပြန်တယ်။ မာမီတို့ဌာနက နှစ်စဉ်ရာသီပွဲတွေမှာ ကပွဲ တွေ၊ ပြဇာတ်တွေ ထည့်လေ့ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အိမ် ဧည့်ခန်းထဲမှာ အရောင်တောက်ပတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဝတ်စုံတွေ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် တွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်တာ။ သူတို့ အ၀တ်အစားတွေကို ကြည့်ြ့ပီး အားမလိုအားမရဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်လိုများချုပ်ထားကြပါလိမ့်။ ကလေးသဘာဝအတိုင်းပါပဲ နောက်ဆုံး မာမီ အံဆွဲထဲက ပိုးထည်စတွေ၊ အ၀တ်စတွေသုံးပြီး ညီမ၀မ်းကွဲရဲ့ naked little body လေးကို မော်ဒယ်လ်အချိုး အစား အဖြစ်ထားကာ belly dancer တစ်ယောက်ရဲ့ ၀တ်စုံမျိုးချုပ်ပစ်ခဲ့တော့တာပေါ့။
ချုပ်ပြီးတော့ အဲဒီဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး မာမီ့ကိုသွားပြခဲ့မိတယ်။ မာမီက အားမပေးချင်လို့လား ဒီလိုအချုပ်အလုပ်တွေ ၀ါသနာပါတဲ့ စိတ်တွေကို ချိုးနှိမ်ချင်လို့လားတော့မသိ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် ဟန်တပြင်ပြင်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကင်မရာကိုင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အပြင် ပြဇာတ်ကတဲ့ဘက်ကို သွားကြည့်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြစ်ပေးတာလေးဟာ မာမီအတွက်ကောင်းတယ်လို့ ထင်ချင် ထင်ခဲ့မိလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ စိတ်ထဲမှာ အငုံ့စိတ်ဖြစ်သွားခဲ့တာအမှန်။ ကျွန်တော် ဘာအပြစ်လုပ်မိလည်းပေါ့။
ပြီးတော့လေ အဲဒီဒေသမှာ ဘဲလေးပြဇာတ်ရုံတွေရှိတာကို သေချာမှတ်မိသေးတယ်။Oh my god မာမီလေ Sleeping Beauty ဆိုတဲ့ ဘဲလေးပြဇာတ်ကိုကြည့်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်သွားခဲ့ဖူးသေး တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အဓိကအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ပြဇာတ်ကြည့်အတွေ့ အကြုံပါပဲ။ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အတိနီးပါးကပ်နေတဲ့ ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ ယောက်ျားအကသမားတွေကို အနီးကပ်မြင်ခဲ့ရတာ။ ဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ Sexuality ကိုစူးစမ်းဖို့ အကောင်းဆုံး ထင်ရဲ့လေ။ ဘောင်းဘီပါးလှပ်လှပ်မှာ သိသာမြင်သာတဲ့ အထုပ်အထည်နဲ့ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားလူတွေကို မြင်ရတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလည်း ဒီ conspicuous bulge တွေကို မျက်စိမလွှဲနိုင် ဖြစ်နေသလား။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်တဲ့ခဲ့ရင်တော့ ခင်ဗျား gay မဟုတ်တာသေချာ တယ်။ အဲဒါပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်မိတာ။
တေးဂီတ၊ အချုပ်အလုပ်၊ အက ဒါတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်သာလို့ သတ်မှတ် ထားကြသလား ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဆယ်ကျော်သက်ကောလိပ်နှစ်ဦးပိုင်းတွေ အထိ အသုံးဝင်နေဆဲပါ။ ကျောင်းမှာ ဘဲလေးအကသင်ပေးတဲ့ ကလပ်အချိန်မှာ ကိုယ့်ဖာသာ ဒီဇိုင်း ဆွဲချုပ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံနဲ့ အံကျပန်ကျပေါ့ အတန်းသားတွေထဲမှာ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကောက်ကြောင်း ကိုအတိုင်းသား ပြနိုင်သလို စိတ်ကိုနှိုးဆွနိုင်ခဲ့တာပေါ့ပရိတ်သတ်ကို။ Dancer's belt ရယ် အသားကပ်နီးပါး ၀တ်စုံတွေနဲ့ ကပြဖြစ်ခဲ့တာ မကြာခဏဆို တော့ နောက်ပိုင်း လူများစွာရဲ့ရှေ့မှာ၊ ကင်မရာတွေ ၀ိုင်းထိုးထားတဲ့ကြားက လှပစွာ လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်မှာ။ ဒါပေမဲ့ အလွယ်တကူနား လည်ဖြစ်ခဲ့တာက ကျွန်တော်ဟာ Nureyev မဟုတ်ခဲ့တာပါပဲ။ ကျွန်တော့် ကဟန်တွေဟာ ရှေးရိုး မဆန်ဘဲ modern dance ဘက်ကို ယိမ်းယိုင်နေ သလိုပဲတဲ့ ဝေဖန်ကြသလို လူငယ်အချင်းချင်း ကတော့ ဖန်တီးနိုင်တယ်၊ လမ်းသစ်ထွင်နိုင်သူရယ်လို့ အားပေးကြတာပေါ့။
Posted by Alex Aung at 8:36 PM No comments:
ကျွန်တော် မာထောင်နေတဲ့ ဘီလ့်ငပဲကို အသာလှမ်းကိုင်လိုက်ရင်း ဘောင်းဘီအပြင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ လိင်တံတစ်ချောင်းကို သေသေချာချာကိုင်ဖူးတာ အထူးသဖြင့်အရွယ် ရောက်ပြီးယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဟာကိုကိုင်တာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စူးစမ်းမိတာပေါ့ ဘယ်လိုအရောင် ဘယ်ဆိုဒ်ရှိ လောက်လည်းဆိုတာ ဟီးဟီး။ နုတော့နူးညံ့သားပဲ.....အသားနုဆိုပေမဲ့ မာတောင်နေတာဆိုတော့ လက်ထဲမှာစီးစီးပိုင်ပိုင်တော့ ရှိတာအမှန်။ မှန်း.....သူ့ရဲ့ရှည်လျား ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ ငပဲတလျှောက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွလျက် ပေးမိသလို ထိပ်အပေါက်လေးထဲကိုလည်း လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးထိုး ထည့်ရင်း မွှေပေးလိုက်တာ ဘီလ်လေ...ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်နေ တယ်နဲ့တူရဲ့ မျက်စိများကိုမှိတ် အံကိုကြိတ်နေပါရော။ သူ ကျွန်တော့် စားပွဲခုံပေါ်ကိုလှမ်းတက်ပြီးထိုင်ရင်း ခုံစွန်းနှစ်ဖက်ကိုအား ပြုရင်း အား....အား... good sucking ........အ။
ကျွန်တော်ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်ရာကျဦးမယ်။ငယ်ကတည်းကခုထိ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေနဲ့ သာဆက်ဆံဖို့ကျိုးစားမိခဲ့သလို လိင်တူ တွေနဲ့အတူနေဖို့ဆိုတာ အတွေ့အကြုံလည်းမရှိ ကျိုးလည်းမကျိုးစား ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ သဘာဝအတိုင်းပါပဲ အလိုလိုနားလည်ပြီး လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သွားတာဗျ။ဘီလ်...သူထိန်းနိုင်သမျှ ကြာအောင် ထိန်းဖို့ကျိုးစားနေသလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တတ်စွမ်းသမျှ ကောင်း ကောင်းလုပ်ပေးတာကြောင့်ထင်ရဲ့ အသားနုဟာ မာသထက်မာလာပြီး သူကျွန်တော့်ခေါင်းကို အသာလှမ်းကိုင်ပြီးဖယ်တယ်။ ဘာလည်းလို့ စူးစမ်းလိုက်တော့ သူမပြီးချင်သေးဘူးတဲ့ ဆက်လုပ်ရင်ထိန်းနိုင် တော့မယ် မထင်ဆိုလို့ ကျွန်တော်မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ရင်း boxer ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ တသသထားခဲ့တဲ့ ညီဘွားက ဘွား ကနဲငုတ်တုန်ထထိုင်လာတယ်။ ဘောင်းဘီကို အဆုံးထိဆွဲချွတ် လိုက်ရင်း You want? လို့ပြောလိုက်တော့ သူ့ခမျာ ဟန်တောင် မဆောင်နိုင်ဘူး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့မျက်လုံး ကိုမလွှဲ တော့တာ။
ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ဂုတ်ကကိုင်ပြီး ဘီလ်ပေါင်ကြားက အပေါက် လေးကို မထိတထိလှမ်းလှမ်း ထိုးလိုက် လက်တဖက်ကလည်း သူ့ငပဲကိုလှမ်းဆွလိုက် အင်း.....သူဒါကိုကြည့်ပြီးစိတ်အရမ်းလှုပ် ရှားနေတယ်နဲ့တူတယ် မမှီတမှီလှမ်းလှမ်းကိုင်တာဗျ။ သူ့ပစ္စည်းထက်ပိုထွား ပိုတုတ်တယ်ပြီးတော့ ထောင်မတ်နေတာ ဆိုတော့လေ။ ခဏနေတော့ သူ့ပစ္စည်းနဲ့ ကျွန်တော့်ဟာ ကိုနှစ်ခုပေါင်း ကိုင်ပြီး တင်ပါးကို ရှေ့ထိုးနောက်ငှင်လုပ်မိတော့ သူလေ စိတ်လှုပ်ရှား တဲ့ညည်းညူသံတွေနဲ့ အတူ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာဘဲ ကျွန်တော့် ကာကီ ရောင်ဘောင်းဘီပေါ်ကို ပန်းထုတ်ပစ်မိတော့တာ။
ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်စွာ."Oh..Fuck …fucks!"...လို့ပဲအော်လိုက်မိတော့တာ ပေါ့ဗျာ။
ဟူး.....ခေါင်းကိုပြန်မတ်လိုက်ရင်း ဘီလ်ရဲ့ ထူအမ်းအမ်း နှုတ်ခမ်း အစုံကို ပြင်းပြင်းပြပြနမ်း မိတယ်။ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းသားနူးညံ့မှုရော ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကနွေးနွေးအိအိအထိအတွေ့ကိုရော ကြိုက်မိလာ တယ်။ အင်း...ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို နမ်းရတာဟာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရင်ခုန်စရာတော့အကောင်းသား။ နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းနေရင်း သူ့အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်၊ Tie တွေကိုဆွဲဖြုတ်နဲ့ပေါ့လုပ်မိတာ။ ပြီးတော့ ဖောင်းကြွတဲ့မာဆယ်တွေနဲ့ ဘီလ်ရဲ့ chest တွေကို အနမ်းဖွဖွတွေပေးရင်း ပွတ်သပ်နေမိသလို သူ့ nipples တွေကိုလည်း လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ ဖျစ်ညှစ်လိုက် ကစားလိုက် လုပ်ပေးမိတာ မာတောင်လာပါရော။
စိတ်ထဲမှာ အကြိုက် တွေ့သွားမိသလိုပဲ သူ့ nipple နောက်တစ်ဖက်ကို ထပ်ကလိပေး မိပြန်တာဗျ။
ပြောရဦးမယ် ဒီအချိန်မှာ ဘီလ်ရဲ့ငပဲဟာ တစ်ကြိမ်ပန်း ထုတ်ပြီးသွား တာတောင် မာနေတုန်းပါပဲ။ နောက်တော့သူပြန်ပြောပြတာက အဲဒီ အချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ အနမ်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ကော၊ ပြီးတော့ ကိုယ်နံ့တစ်မျိုးရစေတာကရော....သူ့စိတ်ထဲ မရိုးမရွနဲ့ တင်ပါးတွေ ထဲကတောင် ခပ်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်လာသလိုပဲတဲ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခပ်ထွားထွားလီးတစ်ချောင်းလုံးကို သွင်းပြီးငြိမ် နေချင်မိတာ ဆိုပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်စမှာကို မစောင့်နဲ့ဘဲပြောမိတာ.. "I want you to fuck me David,"....လို့။ သူ့စိတ်တွေချိုးနှိမ်လို့မရတော့လို့ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာလေ။
"ကဲ....ညီဒါဆိုလည်း ဟိုဘက်လှည့်ပြီး တင်ပါးကိုကော့ထား။"
ကျွန်တော်လေ မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို ကိုင်တွယ်ဖူးတာ မကြာခဏပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘီလ်ရဲ့တင်ပါးတွေလို ကျစ်လစ်မှုရှိတဲ့ အိစက်ပုံမျိုးမဟုတ်သလို....ခံစားရတယ်။ သူ့တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းတစ်ဖက်ကို ခပ်ဖွဖွကိုင်တွယ်ရင်း ဖျစ်ညှစ်မိသလို ကျန်တစ်ဖက်ကိုလည်း ညင်ညင်သာသာ ပွတ်သပ်မိနေတော့တာ။ ဘီလ်ရဲ့ ပန်းနုရောင် အပေါက်လေးကိုအသာဖြဲ ကျွန်တော့် လက်ချောင်းလေးတွေကို တံတွေးဆွတ်ပြီး ခပ်ဖိဖိလေးထိုးကြည့်တော့ တော်တော်ကျဉ်းသေးတာ။ အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက် ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး ဖိထိုးလိုက်နဲ့ Finger-fucking လုပ်ရင်း နှိုးဆွတဲ့အခါ " Ahh....Fuck!" Bill screamed out.
ကျွန်တော်ဆက်မလုပ်ဘဲ နည်းနည်းငြိမ်ပေးလိုက်တယ်။ သူနာများသွားသလားလို့ပေါ့။ လက်ညှိုးကလေးအသွင်း အထုတ်လုပ် တာကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်သင့်မှန်းသိပေမဲ့ အရမ်းကို horny ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ခပ်သွက်သွက်လေးကစားမိပြန်ရော မကြာခင်မှာ။ ဘီလ် မနာလောက်တော့ဘူး လမ်းကြောင်းချောမွေ့သွားပြီထင်တော့မှ ကျွန်တော် ဖြည်းဖြည်းထရပ်လိုက်ပြီး တသသထားခဲ့ရသော ညီဘွား ကို ထိပ်ကနေ အဆုံးထိနှဲ့ပြီးသွင်းလိုက်တာ ဘီလ်ခမျာ ခါးကိုကော့ သွားတာပါပဲ။
စိတ်ကိုနည်းနည်းလျော့ပြီး သိပ်မဆောင့်မိအောင်ထိန်းရသေးတယ်။ အကြင်နာစိတ်လေးဝင်သွားမိလို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ ပြဿနာမဖြစ်အောင် လည်း လုပ်ရဦးမယ်လေ။ ဘီလ်ရဲ့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ချွတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပေးလိုက်တယ် ဒါမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲစမ်း...။ အဆုံးထိထည့်လိုက် ပြန်နှုတ်လိုက်၊ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဆောင့် လိုက်မွှေလိုက် လုပ်ပေးမိတော့ သူ့ဖင်က ရှုံ့ညှစ်မှုပိုပြင်းလာ သလို သူ့ညီဘွားကလည်း ပြန်ထောင်ထလာပြန်ပြီ နောက်တစ်ကြိမ် ပန်းထုတ်ဖို့။
"Fuck I'm gonna cum, I'm gonna cum!" ကျွန်တော့် စားပွဲခုံ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို အားပြုကိုင်ရင်း ဘီလ်က အဲဒီလိုညည်းတွား လေရဲ့။သူက ပိုအော်မိလေ ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်က ပိုမြန်လေပေါ့။
ဘီလ်ရဲ့ အပေါက်ကညှစ်အားတော်တော်ကောင်းသေးတော့ ကျွန်တော်လေအရသာထူးကို ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်ရရှိနေတော့တာပါ။ အပြင်ဆွဲထုတ်တော့လည်းကောင်း၊ ပြန်သွင်းတော့လည်း အိကနဲ အိကနဲ။ မပြီးအောင်မနည်းထိန်းနေရတာ။ တော်ရုံလူဆိုကြာရှည် ထိန်းဖို့ မလွယ်လောက်ဘူး ကိုယ်က အိမ်ထောင်သည်မို့သာ။ အား....သူကလည်း နောက်ပြန်ဆောင့် ကိုယ်ကလည်း ချိန်သား ကိုက်ဆောင့်ဆိုတော့ စည်းချက်ညီတဖောက်ဖောက်နဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနေမိတယ် ကြည်ရှည်မထိန်းနိုင်တော့မှန်း။ပြီးတော့ ဘီလ်ရဲ့ ဖင်ကို လိုးရတာ အိမ်ကမိန်းမကိုလုပ်ရ တာထက်ကောင်းတယ်လို့ တွေးထင် မိရပြန်တယ်။
ဘီလ်....အရမ်းအပေးကောင်းသလို ကျွန်တော်ကလည်း အဆောင့် ကောင်းတော့ မကြာခင်မှာပဲ ....သူ့အော်သံ ခပ်ကျယ်ကျယ်က အစွန်းဆုံးထိရောက်သွားသလို သူ့ဖီလင်ကိုမြင်ရကြားရတဲ့ ကျွန်တော် လည်း သူ့ပုခုံးစွန်းကိုကိုင် အဆုံးထိထိုးထည့်ရင်း တဆစ်ဆစ်ပန်း ထည့်ပစ်လိုက်တော့တယ်။ ဘယ်သူကမှ condom မပါဘဲ ဘီလ်ရဲ့ ဖင်ထဲပန်းထုတ်ခွင့်မရခဲ့ကြတာ ကျွန်တော်က ဦးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးသာ ဖြစ်မည်ထင်ရဲ့။
နှစ်ဦးလုံးပြိုင်တူပြီးတဲ့ အရသာက အတော်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသားပေါ့။
ထိုင်ခုံကိုဆွဲယူလိုက်ရင်း ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုင်ချလိုက် တော့ ဘီလ်ကလည်း ပျော့သွားတဲ့လီးကို မကျွတ်စေရအောင် ဖင်ကို ကျုံ့ထားရင်းအတူထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဖြစ်နိုင်သမျှကြာ ကြာစိမ်ထားချင်တာနဲ့ အံကိုက်ပါပဲ။ရှီး...........ဆိမ့်နေတာပဲ။ ဘီလ်ကို နောက်ကနေ သိုင်းဖက်ရင်း သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိပေးနေ မိတယ်။
သူစိတ်ထဲမှာ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင် ပျော်ရွှင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမိကြောင်းသူ့စကားက သက်သေခံကြားရပြန်တာကတော့ "That was incredible," တဲ့။
ကျွန်တော်လည်း အရသာသစ်ကို ကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံတဲ့ အနေနဲ့ ဘီလ်ရဲ့ ဂုတ်သားလေးတွေ နူးညံ့လည်တိုင်လေးတွေကို အနမ်းဖွဖွပေးနေမိတယ်။ အချိန်နည်းနည်း ကြာတော့ ဘီလ်....သူ့ဖင် ကို ဆော့ကစားနေရင်း ဖင်ကိုကျုံ့လိုက်ပွလိုက်လုပ်နေလိုက် တာ.. ....။ ပြီးတော့ ကုလားထိုင်အစွန်းကို ဖမ်းကိုင်ထားရင်း ဖင်ကိုခပ်ကြွကြွ မြှောက်ကာ ဇကောဝိုင်းကို ဖြည်းဖြည်းငြိမ့်ငြိမ့်လေး လှုပ်ရှားရင်း ဖီးလ် ကိုခပ်မြှင်းမြှင်းယူနေလေရဲ့။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ မှေးမှိတ်မိရ အောင်ပဲ ရင်ဘတ်ထဲသွေးတွေ စီးဆင်းမှုမြန်လာသလားမသိ ရင်ခုန် သံတွေ တဒိတ်ဒိတ်ဖြစ်လာသလို ပျော့နေတဲ့လီးဟာလည်း ထကြွလာလိုက်တာ ဘီလ်ရဲ့ ပန်းနုရောင်အပေါက်လေး ပြန်ပြီးပြည့် သွားတာ လက်တွေ့။ခပ်ဖွဖွ အပေါ်ကဆောင့်ပေး မွှေပေးမှုကြောင့် ကျွန်တော့် moaned အသံတိုးတိုးတောင် မရည်ရွယ်ဘဲထွက် လာရ တယ်။ ဘီလ်မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေများဝေဆာနေသလား...... သူကျိတ်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့သူ ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်ဆံခွင့်ရခဲ့လို့တဲ့လေ။ သူ့ဖီးလ်ကိုလည်း အပြည့်အ၀နှိုးဆွနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောပေါ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူသတိပြုမိသွားတာကတော့ ကျွန်တော်ဟာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆက်ဆံရတာကို ကြိုက်သူဆိုတာ။
အား....အ...သွက်သွက်....သွက်သွက်လေး အပေါ်ကဆောင့်ချလိုက် ဖင်ကိုနှဲ့ထိုင်လိုက်ကစေားနေတာ သူ့စိတ်ကြိုက်။ ကျွန်တော်လေ အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးရင်း အား....အ....နောက်တစ်ကြိမ်...နောက်တစ်ကြိမ် ပန်းထုတ်မိပြန်ပေါ့။
"Pay back time." was all Bill said.
ကျွန်တော် အချိန်ဆွဲပြီးလုပ်ဖို့ စိတ်ကိုထိန်းဖို့ ကျိုးစားမိခဲ့ပေမဲ့ မရခဲ့ပါဘူး။ ဘီလ်ရဲ့ Ass ကကောင်းလွန်းနေတာကိုး။ ကျွန်တော်.. .အား..အ ဆိုတဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းအော်သံနဲ့အတူ ဘီလ်ရဲ့ Asshole ထဲ နောက်တစ်ကြိမ်ပန်းထည့်မိပြန်တော့တာပေါ့။ ဘီလ်လေ ဒေးဗစ်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲလှဲလျောင်းရင်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးနေတယ်.. .ကျေနပ်ပြုံး ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင် တစ်ခုလုံး ဘီလ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပြည့်။
ဒီဟာ ဒီအချိန် ဒီညလေးဟာ အိမ်ပြန်နောက်ကျတော့မည့် ညများစွာရဲ့ ပထမဦးဆုံးညပါပဲ။
ဒီရုံးမှာ အလုပ်လုပ်တာ မကြာသေးပါဘူး။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုကြောင့်ရာထူးကြီးကြီးရတယ်၊ လစာကောင်းတယ် အခွင့်ထူးတချို့ကိုပိုရတယ်။ ထားပါတော့လေ သူများထက်ရာထူး ကြီးတော့ တာဝန်လည်းပိုကြီးပါတယ်။ လကုန်ရက်တွေမှာဆိုရင် အထက်လူကြီးကိုတင်ပြဖို့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ စသဖြင့် ရီပို့စ်တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်။ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာတွေလုပ်နေဆဲ၊ ဘာတွေပြင်ဆင် ထားတယ် စတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါသပေါ့။
ကျွန်တော် ဒီလိုအချိန်တွေကို အမုန်းဆုံးပါပဲ။ အထူးသဖြင့် လကုန်ရက်တွေမှာ ပုံမှန်ကိုဖြစ်နေ တော့တာကတော့ ရုံးမှာအလုပ်များ၊ တစ်ချို့အလုပ်တွေက ဒီမှာအပြီးလုပ်မှဖြစ်တာဆိုတော့ လုပ်နေ အလုပ်ပြီးချိန်ကသန်းခေါင်ချိန် အဲဒီတော့ကာ အိမ်ပြန်ချိန်ကိုနှောင့်နှေးစေတာ မကြာခဏ။ အင်း....အိမ်က အိမ်သူသက်ထားကိုလည်း ပစ်ထားသလိုဖြစ်နေမိတော့ ခေါင်းခဲစရာကို ပိုမိုဖန်တီး မိသလို ဖြစ်နေတော့တာပဲဗျ။ မိန်းမက အိမ်ပြန်ချိန်နောက်ကျရခြင်း အကြောင်းတွေကို အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံကြားနေရတော့ သူ့ခမျာမုန်းနေပြီလေ။ အိပ်ရာခန်းကိစ္စမှာလည်း အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ကိုယ်ပြန်ချိန်က နောက်ကျ ပင်လည်းပင်ပန်း နေတော့ အ၀တ်လည်းပြီးတာနဲ့ အိပ်ရာထဲဝင်ခွေပြီး အိပ်ပျော်သွားရော။ ဒီတော့ကာ ဖောက်ပြားနေတယ် ဂရုမစိုက်ဘူးစတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ မိန်းမကတင်နေသလို ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ အတူတောင်အိပ်ခွင့်မရပါဘူး။
အရင်တစ်လနှစ်လလောက်က အဖြစ်ကိုပြန်သတိရမိသေးတယ်။ ကိုယ်ကအလုပ်များ အိမ်မပြန်နိုင်၊ အိမ်ပြန်ချိန်နောက်ကျတော့ မိန်းမနဲ့အဆင်မပြေ ဒီတော့ ရုံးနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ ဟိုတယ်က အပျော်မယ်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ပျော်ပါးမိခဲ့တာကိုလေ။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမှန်းသိသလိုလို မသိသလိုလိုဘဲ။
"အစ်ကို၊ ဒီည တစ်ခြားဘာလုပ်စရာရှိသေးလဲဗျ။" ဘီလ်ကမေးတာလေ။ သူက ကျွန်တော့် အတွက် အသစ်ခန့်ထားတဲ့ လက်ထောက်အရာရှိတစ်ဦးပါ။ သူဟာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတက်ကြွ နေတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းဆင်းကာစ လူငယ်လေးပါပဲ။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဒီအလုပ်ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့ အလုပ်လေ သူကျောင်းပြီးပြီးချင်း။ ဒီကလေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ၊ အချိန်ဖြုန်းရတာလည်း မဆိုးပါဘူး။ သူအမြဲတမ်း မထိတထိအမြဲစတယ် ဟိုကိုင်ဒီကိုင်နဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ညီငယ်တစ်ယောက်လို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောင့် ပေးပါတယ်။ ဘီလ်ကတော့ ဘယ်လိုသဘောထားတယ်မသိကျွန်တော့်အပေါ်။
" သိပ်မရှိပါဘူး ညီ၊ မင်းပြန်ချင်ပြန်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်နောက်နာရီဝက် တစ်နာရီလောက်ဆိုပြီးပြီ။ နှစ်ယောက်လုံးနေဖို့ မလိုဘူးကွ။" သူ့ကြည့်ရတာ မကျေမနပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံနဲ့။ သူလွတ်လွတ် လပ်လပ် ပြန်လို့ရ အနားယူလို့ရတဲ့ဟာ...ပြီးတော့ လူငယ်ပီပီ ဒိတ်လုပ်ပြီးအပြင် ထွက်ဖို့ အချိန်တောင်ရသေးတယ်။ "အစ်ကို ပါတီ ဒါမှမဟုတ် ကလပ်သွားဦးမှာမလား၊ ကျွန်တော်မတားချင်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အစ်ကိုသွားရင် လိုက်ချင်တာဗျ။" သူပြောနေတဲ့ပုံစံက အိမ်ကမိန်းမကျနေတာပဲပြောနေတာ။ ပြောသေးတယ် " အစ်ကိုက အဲဒီလိုသွားတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ရမှာပေါ့။" ဆိုတာမျိုးတွေ..." ကျွန်တော်ဘယ်မှ သွားစရာမရှိပါဘူး။"...အင်း ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တာတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကျွန်တော့်ချစ်သူလည်းမဟုတ်၊ အိမ်သူသက်ထားလည်းမဟုတ်တော့ စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်မိသား။
ကျွန်တော် အဲဒါတွေကို နည်းနည်းတော့ သတိထားတွေးမိ သတိပြုမိတယ်။သူ့အိမ်က ကျွန်တော်တို့ အိမ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတယ်။သူကောလိပ်မပြီးခင် ကတည်းကလမ်းမှာ မြင်ဖူးနေကျ နှုတ်ဆက်စကားပြောနေကျလေ။အဲဒီကတည်းက ဒီကောင်လေး ငါ့ကိုတော့ ဂရုစိုက်တယ်၊ ခင်မင်တတ်သားပဲလို့ အမှတ်တွေးပေးမိခဲ့သေးတယ်။အလုပ်မှာ တွေ့တော့ သိပ်မအံ့သြမိပေမဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုတော့ဖြစ်သလိုပါပဲ....။
ရုံးမှာ ဒီလိုအချိန်မှာ အတူမရှိစေချင်တာရော ပြီးတော့ ဘီလ်မှာ ရှင်းမပြတတ်တဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတာ။ ဟင်း.....ကျွန်တော် အဲဒီအကြောင်းကို မစဉ်းစားမိဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးနေရ တယ်။ အဲဒီအသွင်အပြင်၊ စိတ်သဘောထားအပြုအမူတွေ ဂရုစိုက်မှုအပေါ်သာယာမှုတွေကို သတိပြုမိတာ မကြာသေးပါဘူး။ တစ်ခြားလူ အထူးသဖြင့် မျိုးတူယောက်ျား တစ်ယောက် အတွက် အဲဒီဖီလင် ရှိနေတာကို ငြင်းဆန်နေမိတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ အမြန်ပြန်ခိုင်းရမလား၊ ကျွန်တော်နဲ့အတူ နောက်ကျပြီးမှ အတူပြန်ခွင့်ပေး ရမလားပေါ့။ မနေ့ညကလည်း သူစည်း ကျော်မိတော့မလို့....တော်ပါသေးရဲ့။ မိမိ Professional Level က အလုပ်တွေကို ကြိုးစားပြီးလုပ်ဖို့ ဘီလ်ရဲ့အကူအညီကို ယူနိုင်ခဲ့တာအမှန်ပဲ။
ညက..အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိအောင် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ အတူတူနှစ်ယောက် သား အလုပ်တွေလုပ်ကြပြီး နက်ဖြန်တွေအတွက်လည်း ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ပြင်ဆင် ဖြစ်ခဲ့ကြ တယ်။
ကျွန်တော်အခုတော့ စိတ်ပြောင်းသွားပြီ ..ဘီလ်ကို ဒီညဒီမှာအတူနေခွင့်ပြုဖို့ကိုလေ။ သူဟာ ကျွန်တော့်ကို အကူအညီပေးနိုင်တာမှန်ပေမဲ့...နေရခက်အောင် အတော်လုပ်သူပဲ။ အကြည့်အပြောတွေက ပြီတီတီနဲ့မို့။
"အင်း....ကြည့်ရတာ ပြီးခါနီးပြီကွ...သိပ်မရှိတော့ဘူးလုပ်စရာ။" ရီပို့စ်တွေကို ပြင်ဆင်နေရင်း သူ့ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြောလိုက်မိတော့ သူက
"No, not everything" Bill Said.
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို တစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း ရုံးခန်းတံခါးပိတ်ထားမထား တစ်ချက်ရှိုးလိုက်သေးတယ်။
ဘီလ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်နေတာက တစ်မျိုးတစ်မည်ခံစားရ သလိုပဲ။ ဟော....သူကျွန်တော့်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေရင်းတဖြည်းဖြည်း အနားကပ် လာတယ်။ သူ့လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဟစ်ဟော့ပ် အဆိုတော်တွေလို ပေါင်ဂွကြား ကိုပွတ်သပ်ရင်းလေ။ ရင်တွေတောင် မခုန်စဖူးခုန်မိလာတယ်။ စိတ်ကိုထကြွစေတဲ့ အမူအယာတွေ ဟန်ပန်တွေလုပ်ပြ နေတာကြောင့်ရော လိင်မဆက်ဆံရတာကြာ လှပြီဆိုတာရောကြောင့် ဘီလ်ပြုမူနေတာတွေက ထကြွလာအောင်နှိုးဆွနေသလိုပါပဲ။ အနီးကပ်လာတာဆိုတော့ မြင်နေရတာက သူ့ကာကီရောင်ဘောင်းဘီအောက်က တဖြည်းဖြည်းထကြွလာတဲ့ ငပဲကို။ ဘီလ်ကျွန်တော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ဆိုဖာပေါ်မှာ ခပ်ကားကားထိုင်ရင်းကျွန်တော့်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးသူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနဲ့သပ်ပြ နေတာ....အား..လာထား ကိုယ့်ညီဘွားအတွက် အချိန်မဖြုန်းတော့ဘူး။ ခါးက ခါးပတ်တွေ ဘောင်းဘီတွေကိုလျောချလိုက်ကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ မတ်တပ်ထရပ်လိုက် တော့တာပေါ့ ဘီလ့်ရှေ့မှာ။ သူလည်း ရင်ခုန်သံတွေမြန်နေတယ်နဲ့တူတယ် ဖောင်းကြွလှုပ်ရှား နေတဲ့ ရင်အစုံ၊မျှော်လင့်မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ငံ့လင့်နေသလိုပါ။
Posted by Alex Aung at 2:32 PM No comments: